Ngaphandle kwethalassotherapy ecebisa kangaka?
I-thalassotherapy yelizwi ithetha unyango olwandle. Le ndlela yonyango isekelwe ekusebenziseni i-algae, ityuwa kunye netyuwa yetyuwa, udaka nolwandle lwentlambo ngokudibanisa ne-massage, jacuzzi, ukuzivocavoca umzimba.
Iimpawu zonyango zolwandle zisetyenziswe ukususela kumaxesha amandulo. Inqwenela yolwandle lwamanzi yabonwa nguEuripides noHippocrates. Iiminyaka eziwaka mathathu ezadlulayo eTunisia zakha imigaqo, eyayisebenzisa ngamanzi amanzi olwandle. Ngo-1867 i-thalassotherapy yafakwa kwi-physiotherapy ngudokotela waseFransi waseLa Bonnardier.
Namhlanje i-thalassotherapy ingasetyenziselwa kuphela ubuhle beemononi, iikliniki okanye indawo zokuhlaliswa kwezempilo, kodwa nasekhaya. Kuyaziwa ukuba iinkqubo kunye nokusetyenziswa kwe-algae, amanzi ashushu olwandle afudumele kunye nodaka luncedo kakhulu. Amanzi amathala e-thalassotherapy athatyathwa yinqwelo engcolileyo kunye nobutyebi kwizithayamaminerti ezisuka kumitha engama-6 ubude kwaye umgama osuka elunxwemeni awukho ngaphantsi kwama-450 emitha. Ukuba engaphantsi kwemizuzu engamashumi amabini uhlamba ngamanzi ashushu olwandle, ngoko ulusu ngesikhumba ngeli xesha lungafumana zonke izinto ezifunekayo. Amaziko aseFransi, eTunisia kunye namaSirayeli athathwa njengamaziko angcono kakhulu e-thalassotherapy.
Amanzi olwandle aneempawu zonyango ngenxa yobume be-microelements, amaminerali kunye nama-microorganisms ezifaka isandla ekuphuculeni imetabolism. Ukusetyenziswa kwamanxwemeni kukukho kuzo iiprotheni, izityu, iivithamini kunye neemaminera: iodine, ithusi, isinyithi, i-magnesium, i-silicon. Ngoxa uncedo lwe-algae, kunokwenzeka ukuba ususe ama-slags, uhlambulule isikhumba, nabo bawomeleze.
Ngaphandle kwethalassotherapy ecebisa kangaka? I-Thalassotherapy yithuba elihle kubantu abafuna ukuhlaziya umzimba kunye nokuphumula. Iintlanzi zasemanzini eziphumelelayo kunyango lwezifo: ukuphazamiseka kokulala, uxinzelelo, i-rheumatism, ukugula, izifo zesifo somzimba, i-dermatitis, i-cellulitis, i-arthritis, i-osteochondrosis, ubunzima obukhulu, ukuphazamiseka kokujikeleza.
I-Algal wraps isetyenziselwa ukuphatha i-cellulite. Kwiinkalo zengxaki zesikhumba, i-biomass ekhethekileyo esuka kwi-algae isetyenziswe, kwaye umzimba ugoqwe ngeethambo ezininzi. Ngenxa yokwanda kweqondo lokushisa, ukuhlanjululwa kwesikhumba kunye nezondlo kunye nemiphumo yezi zinto zanda. Iimveliso zenza i-stimulus ye-metabolism, ekunciphiseni ukukhukhuma kwesikhumba, ukuphucula ukujikeleza kwegazi nokuphelisa i-orange peel.
Ukugqithwa okunjalo kunokwenziwa ngokwabo, kuthengwa ukwakheka kokubambisa, okubandakanya i-algae, kunye nemali eyongezelelweyo ngokusekelwe kwisiseko-ukuhlahlela, i-gel kunye ne-moisturizer. Okokuqala, kufuneka uhlambulule isikhumba nge-scrub uze usebenzise i-gel, kwaye ngoko-ukwakheka kwento. Iindawo zesikhumba apho ukusetyenziswa kwazo kufuneka zifakwe kwifilimu yokutya kwaye zifakwe ngengubo. Emva kwemizuzu engamashumi amathathu, thatha uhlambe, uze unyuse isikhumba ngekrimu okanye emulsion, unokusebenzisa i-anti-cellulite cream.
I-Thalassotherapy inceda kwesikhumba ebusweni. I-Algae iqulethe izinto ezisebenzayo iinkqubo zesikhumba kunye nokwandisa ithoni yesikhumba. Ukuba unesikhumba sotyebileyo, ungasebenzisa iimaski ukusuka kwidaka lolwandle, zihlambulule iiperesi, zinciphise izinto ezinamafutha.
Cavitotherapy. Umoya wolwandle.
I-Thalassotherapy iyakunceda ekunyangeni izifo zokuphefumula. I-Cavitotherapy - unyango lwengqondo yolwandle lusekelwe kwinto yokuba i-oksijeni iyaphumelela, evelisa amaninzi amaninzi. I-Cavitotherapy ikhuthaza ukuhlanjululwa kwe-bronchi. Ukuhlala elwandle kukunceda unyango lweengxaki ezininzi zesistim.
I-Hydromassage isetyenziswe kunyango lwe-musculoskelet system. Impembelelo yokwelapha ifumaneka ngokudibanisa i-massage eqhelekileyo kunye namajelo athile amanzi olwandle. I-Hydromassage ivuselela kunye neetones, iphucula umsebenti we-muscular kuphela, kodwa iphinde ibe nomsebenzi wamalungu. Emanzini okubhukuda ngamanzi olwandle, i-gymnastics iyenziwa. Ngexesha lokuhlala kwesigulane emanzini, umthwalo emgodleni wehla kwaye ngexesha elifanayo umthwalo wezihlanganisi ezithile kunye nezihlunu zanda. I-element ye-thalassotherapy nayo iidlo, eziquka ukutya kwezilwanyana zasemanzini.
UJulia Sobolevskaya , ngokukhethekileyo kwisiza
Ukusebenzisa amalahle amhlophe ukulahleka kwesisindo
Iimaski ezisuka kwimifuno ebusweni
Ukunyangwa kwezifo zamehlo ngezilwanyana zomntu
Ukuhlanjululwa komzimba kunye nemifuno
Izinzuzo zetiza ze-ginger
Ukupheka okumnandi kwiitya zokutya
Nan O Tawa Indian tortilla
Imithetho yokondla yokuphila kwindlela yokuphila
I-Sinusitis ngexesha lokukhulelwa
Ikhekhe lekhadi ngaphandle kokubhaka
I-Pressotherapy - i-massage ye-hardware
Ingxowa yengulube kunye negalikhi
IsiNgesi nguGlen Doman
Indlela yokuchitha ukulayila iintsuku
Izakhiwo zokwelapha ze-nettle
Izakhiwo zokwelapha kunye neengcobo zodongwe
"Ukukhanya okuBlue blue 2016": iifoto ezinqabileyo ukusuka kwisethi
Kutheni ukuvala abantu bengasityesheli?
Abantu - "i-jumpers" banqwenela ukubonakala kwintsha